Hoggaamiyaha Aqlabiyada Baarlamaanka & Xildhibaanno Kale Oo Soomaali Ah Oo Lagu Eedeeyay In Ay Haystaan Laba Baasaboor | Himilo Media Group
Hoggaamiyaha Aqlabiyada Baarlamaanka & Xildhibaanno Kale Oo Soomaali Ah Oo Lagu Eedeeyay In Ay Haystaan Laba Baasaboor
Nairobi, 06 Oct, 2019 (Himilo)-Aden Barre Ducaale oo laga soo doorto Garisa, waa hoggaamiyaha Aqlabiyadda Baarlamaanka Kenya ayaa beeniyay in uu haysto dhalashada dal kale, ka dib markii arrintaa lagu eedeeyey isaga iyo xildhibaanno kale oo qaarkood ay Soomaali yihiin.
Xildhibaan Ducaale wuxuu sheegay in ay shirqool u dhigayaan dad uu ku tilmaamay “kuwo iska dhigaya in ay shaqo hayaan, dadka kalena ku mashquulaan”.
Hadalkan Ducaale wuxuu immanayaa ka dib markii Guddiga ladagaallanka Musuqmaasuqa ee Kenya ee EACC, uu billaabay baadhitaan la xidhiidha madaxda dowladda ee haysta dhalashada dalal kale, taas oo khilaafsan Xeerka Hoggaaminta iyo Daacadnimada ee Kenya.
Waxaa suuragal ah in ugu yaraan 10 xildhibaan ay lumiyaan kuraastooda, arrimo la xidhiidha haysashada laba dhalasho, ka dib markii qof ololeeye ah uu guddiga la dagaallanka Musuqa ku qanciyay in ay baadhaan sida ay daacad ugu yihiin dalalka kale, waxa sidaa qoray wargeyska Daily Nation ee Kenya.
Guddiga wuxuu xalay sheegay in uu hubinayo xildhibaannadaas qaar ka mid ah haddii ay baasaboor kale haystaan ‘taas oo ka soo horjeeda sharciga’.
Ducaale wuxuu sheegay in weligii aanu qaadan dhalashada dal kale oo aan ahayn Kenya, weligiina aanu dooneyn arrintaasi, waxaanu bartiisa Twitter-ka ku qoray, “Waa arrin dadku wada og yihiin in aan ku faanayo dhalashada Kenya, mana haysto dhalasho labaad, weligeyna ma qaadan sharciga dal kale, mana qaadan doono weligeyna, waxaan dhiigga ka aheyn Kenyan, weligeyna waan ku waarayaan Kenyan-nimada”. Ayuu yidhi Hoggaamiyaha Aqlabiyada Baarlamaanka Kenya